कक्षाकोठाबाहिर खोइ समानता !- विचार - कान्तिपुर समाचार
असार २५, २०७७ रुषा अधिकारी
‘भित्र होइन बाहिरै है ! बाहिरै !’
यस वाक्यले मलाई बाह्र वर्षको उमेरमा जातीयतामा आधारित भेदभावसँग पहिलोपटक साक्षात्कार गराएका थियो । समाजले तयार पारिदिएको जातीयताको वर्गीकरणमा ‘उपल्लो’ स्थानमा पर्ने उपाध्याय ब्राह्मणको घरमा जन्मिएँ म ।
जन्मदेखि नै सहरी र ग्रामीण दुवै परिवेशमा हुर्किएकी मैले ‘छुवाछूत’ के हो, महसुस गर्न पाइसकेकी थिइनँ ।
असारको महिना, मकै गोड्ने चटारो । आमाले बारीको कामका लागि प्रायः ती दाइ–दिदीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो । हाम्रा पुर्खाकै पालादेखि उहाँहरूले हाम्रो बारीमा पसिना बगाएर हातमुख जोर्दै आउनुभएको थियो । एक दिन म कारणवश विद्यालय गएकी थिइनँ । उहाँहरू चिया खान आएका बेला हजुरआमाले मलाई बोलाउँदै भन्नुभयो, ‘नानी, बाहिर गएर तिनीहरूलाई यो चिया दे ।’
अरू आउँदा घरभित्रै बोलाएर चिया खान दिने हजुरआमालाई छक्क परेर हेर्दै मैले भनें, ‘ह्या, भित्रै बोलाएर दिनू न !’ मेघ गर्जे जस्तो प्रतिक्रिया आयो, ‘भित्र छिर्न दिएर टाउकोमा टेकाउन नखोज् । बढी जान्ने हुँदी रछे !’ हजुरआमाले हातमा थमाइदिनुभएको किस्तीमा तातो चिया बोकेर म घरको ‘मूलढोका’ बाहिर गएँ । त्यहाँ पुग्दा चिया मेरो मनजस्तै चिसो भइसकेको थियो । ‘स्कुल गइनौ बुनु ?’ एक जनाले सोध्नुभयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘सन्चो छैन अनि ।’ मलाई बिसन्चो यही घटनाले बनाएको थियो ।
सामाजिक शिक्षा पुस्तकमा लेखिएका ‘सबै व्यक्ति समान हुन्, कसैलाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुँदैन’ भन्ने वाक्य र शिक्षकले दिएका उदाहरणहरू मेरो वास्तविक जीवनका घटनासँग मेल खाइरहेका थिएनन् । शैक्षिक ज्ञान र समाजको सिकाइले मलाई छुवाछूतबारे जान्न उत्सुक बनायो । यसै क्रममा मैले हजुरआमालाई प्रश्न गरें, ‘हामी सबै समान त हौं । किन उहाँहरूलाई घरभित्र पस्न नदिनुभएको ?’ ‘तिनीहरू दलित हुन् । फोहोरी हुन्छन् । नुहाउँदैनन् ।’ हजुरआमाको जवाफ सुनेर मनै अमिलो भयो । त्यस बेला सशस्त्र द्वन्द्व चर्चाको विषय हुने गर्थ्यो ।
यसका प्रभाव र असरबारे मेरा अभिभावकहरू कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो । कक्षा ९ मा पुग्दा मैले द्वन्द्वकालको अन्त्यसँगै २०६३ को बृहत् शान्ति सम्झौताले दलित मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेको कुरा आफ्ना सामाजिक शिक्षकमार्फत थाहा पाएँ । लगातारको प्रयास र पैरवीले राजतन्त्रको समाप्तिसँगै अन्तरिम संविधान, २०६३ को बनेको मलाई आमाले सुनाउनुभयो ।
देशलाई नयाँ संविधान दिन जनप्रतिनिधिहरू लागिरहेका बेला २०७२ मा म ‘टिच फर नेपाल’ मा स्वयंसेवी शिक्षकका रूपमा आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न ललितपुरको एउटा दुर्गम गाउँ गएकी थिएँ । विभिन्न जातजातिको बसोबास रहेको त्यो गाउँ भौतिक विकासमा धेरै पछाडि थियो । प्रायः स्थानीय बासिन्दाबाट मलाई प्रश्न आउने गर्थ्यो, ‘मिसको थर के ?’ मैले जवाफ दिएपछि प्रतिप्रश्न हुन्थ्यो, ‘बाहुन नै कि ?’ मैले ‘बाहुन नै’ भनेपछि उहाँहरू ‘ए’ भन्दै मुस्काउनुहुन्थ्यो । सदियौंदेखि समाजले निर्धारण गरेको ‘उच्च जात’ की भएर होला, मलाई चाँडै त्यहाँको ब्राह्मण समुदायले स्वीकार गर्‍यो ।
विनाशकारी भूकम्पले लडाएका सपनाहरू फेरि उठिरहेकै बेला २०७१ को एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो । मैले पढाउने विद्यालयका विद्यार्थीहरू राम्रो अंकसाथ उत्तीर्ण भएछन् । सबैतिर हर्षोल्लास थियो । यत्तिकैमा एक विद्यार्थीले शिक्षकहरूलाई भोजको निम्तो पठाइन् । कुनै विद्यार्थीले भोज खान बोलाएको आफ्नो पहिलो अनुभव भएकाले म अत्यन्तै उत्साहित थिएँ । भोलिपल्ट छुट्टी भएपछि हामी सबै ती विद्यार्थीको घरतर्फको ओरालो लाग्दै गर्दा सहकर्मी मित्रले भन्नुभयो, ‘ए मिसहरू, भोज त्यता होइन, यता ।’ ‘ओहो, व्यवस्था त राम्रै गरिछन् नानीले । धेरै जना छौं, घरमा गर्न गाह्रै हुन्छ नि !’ मैले भनें अनि हामी त्यतै लाग्यौं ।
तयारी वास्तवमै भव्य रहेछ । आफ्नो घरमा नभए पनि उनकै परिवारको खर्चमा हामीले चिनेकै ब्राह्मण व्यक्तिको घरमा भोज आयोजना गरिएको रहेछ । कुखुराको मासु, चिसो पेय, चिउरा, तरकारी, अचार र दहीको व्यवस्था थियो । ती सबै परिकार भान्साभित्र अरू कसैले तयार पारिरहेका थिए अनि उनी र उनको परिवार घरको मूलढोकाबाहिर उभिएका थिए । ठ्याक्कै त्यसै गरी जसरी मेरो बाल्यकालमा ती दाइ–दिदीहरू खडा हुनुहुन्थ्यो । ती विद्यार्थीले त हामीलाई सम्मानपूर्वक भोजमा स्वागत गरेकी थिइन्, तर निम्तो दिनेकै, जो समाजले निर्धारण गरेको ‘अछुत जात’ की थिइन्, भावना र जातीयताको सम्मान थिएन । भोज सुरु हुने बेला हामी केहीले ती विद्यार्थीलाई भन्यौं, ‘हामी त तिमीले बाँड्ने भए मात्र खाने है !’
अचानक त्यहाँ शून्यता छायो, अर्धगोलाकार आकारमा बसेका सबै जनाको ध्यानाकर्षण भयो । कोही खिस्स हाँस्नुभयो; अरू हल्का रिसाएझैं देखिनुभयो । हाम्रो कुरा काट्न नसकेर बाध्य भई ती विद्यार्थीले बाँडेको खानाको थाल हातमा लिँदै जानुभयो, पालैपालो । अचानक एक शिक्षकले भन्नुभयो, ‘मेरो त व्रत छ है, केही खान्नँ ।’ ‘अरू चीजको व्यवस्था गरौं ?’ ती विद्यार्थीले सोधिन् । चिसो प्रतिक्रिया आयो, ‘पर्दैन । म घर गएरै खान्छु ।’
फेरि कसैले भन्नुभयो, ‘पानी चाहियो । बोतल यता पास गरौं न ।’ ‘यो पानी पनि उसैको हातबाट लिनुपर्ने होला फेरि !’ एक जनाले हामीलाई व्यंग्य गर्नुभयो । म, मेरा साथीहरू, ती विद्यार्थी र उनको परिवारबाहेक त्यहाँ उपस्थित सबै जना हाँस्नुभयो । दिनभरि विद्यार्थीहरूलाई समाजका कुरीति र समानताबारे पाठ सिकाउने हामीजस्ता शिक्षकहरू कक्षाकोठाबाहिर पुग्नेबित्तिकै त्यही कुरीतिको अभियन्ता बन्यौं भन्ने लाग्यो ।
तर हामीलाई आफ्नै हातले खाना दिन पाउँदा ती विद्यार्थी खुसी थिइन् । फर्किने बेला हामीलाई उनले भावुक भएर भनिन्, ‘धन्यवाद !’ यो अनुभवले उनको आत्मविश्वासलाई बढायो पक्कै । नेपालमा ऐतिहासिक संविधान जारी भयो । लामो प्रतीक्षापछि आएको संविधानलाई हालसम्मकै प्रगतिशील भनी विश्लेषण गरियो । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका मौलिक हक समेटेको भनियो । तर, अवस्थामा परिवर्तन आएन, आउन सकेको छैन । जातीयतामा आधारित हिंसा हाम्रो बोली र व्यवहारमा अझै जिउँदो छ ।
‘कस्तो दमाई–कामीजस्तो टाढा बसेको ?’, ‘दलित हो र त्यस्तो नदेखिने ?’, ‘हामी सबैलाई समान व्यवहार गर्छौं तर बिहावारी आफ्नै जातको सँग हुनुपर्छ’, ‘जमानादेखि चलिआएको चलन एकै दिनमा कहाँ सबै बदलिन्छ ?’, ‘यिनीहरूको जातै त्यस्तै हो’ जस्ता टिप्पणी अचेल पनि दिनहुँजसो सुनिन्छन् । अनि अचानक रुकुममा दलित युवाको हत्या हुँदा, रुपन्देहीमा दलित बालिकालाई बलात्कारपछि पीडकसँगै बिहे गरिदिनाले उसको शंकास्पद मृत्यु हुँदा हाम्रा आँखा रसाउँछन् । महामारीका बेला आइसोलेसनमा बस्दा दलितले पकाएको नचल्ने कुरा सुन्दा हामी आक्रोशित हुन्छौं अनि सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध गर्छौं । तर, यतिले मात्र पुग्ला ?
नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि हाम्रो सोचाइ परिवर्तन हुने गति कछुवाको जस्तै छ । ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ त्यति बेला हुन्छौं, जब हरेक फूलको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न थाल्छौं । जातीय हिंसालाई अन्त्य गर्न कागजमा छापिएका नीति र कानुनलाई हामीले आफ्नो विचार, बोली र व्यवहारमा नउतारी परिवर्तन असम्भव छ । जातीयताका आधारमा हुने हिंसाजस्तो सामाजिक विकृतिलाई संस्कृति मान्न छोडेर अब हामीले विचारको मूलढोका खोल्न आवश्यक छ । सकिएला ?
प्रकाशित : असार २५, २०७७ १०:२७
जनता राजनीतिक दलका जात्रा र तमासा हेर्दाहेर्दा आजित भैसकेका छन् । अब हुने कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व–संयोजन देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
असार २५, २०७७ किशोर नेपाल
चुनावी अंकगणितले पारेको अप्ठेरो अवस्थामा सत्ता र शक्तिको बहुदलीय समीकरण बनाउन अब्बल मानिने कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट ठगिएको अनुभूति भएको छ ।
असार १७ गते बुधबार साँझ आफूलाई प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार बोलाएर एमसीसी, नागरिकता लगायतका प्रस्तावहरू र सम्भावित समीकरणबारे गम्भीर वार्ता गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले असार १८ गते बिहीबार कसैलाई थाहै नदिई राष्ट्रपतिबाट संसद्को छैटौं अधिवेशनको हठात् अन्त्य गराउलान् भनी देउवाले सोचेका थिएनन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, निर्माणको दुई वर्षपछि, आपसी विवादले थिलथिलो भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने आकांक्षा कांग्रेसका केही नेताले पक्कै पालेका थिए । तर, कांग्रेसका बाँकी नेताहरू यतातिर ध्यान दिने मनस्थितिमा थिएनन् । स्वयं सभापति देउवामा पनि नयाँ समीकरण निर्माणमा खासै रुचि देखिएन ।
कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ताले वामपन्थीहरूसँग राजनीतिक समीकरणविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छन् । गएको चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन नगरेको भए कांग्रेसको मत घट्ने थिएन भन्ने पनि धेरै छन् । नेपालमा कांग्रेस र पछिल्लो समयका वामपन्थी हाकाहाकी एकअर्काको विरोधमा लागेको प्रत्यक्ष नै छ । यो अवस्थामा देउवाले आफ्ना मित्र प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार टिकाउन रुचि नराख्नु बेठीक होइन । सम्भवतः यही कारणले होला, पछिल्लो समयमा सभापति देउवा आगामी महाधिवेशनको सफलतामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । आगामी फागुन ७ गतेका लागि निर्धारित महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ । त्यतिन्जेल देशबाट कोरोना महामारीको चाप हट्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसपटक कांग्रेस महाधिवेशन निकै रोचक हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म सभापतिका सशक्त उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका देउवाले महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गरे भने आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन । उनी सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने छनक देखिन थालिसकेका छन् । ‘भित्रिया’ स्रोतका अनुसार, उनी धेरै किचकिच सहने मुडमा देखिँदैनन् । उनले आफ्नो ‘मनपेट’ कसैलाई दिएका छैनन् र पनि आफ्ना केही शुभचिन्तकसँग यो कुराको उठान गरेका छन् । उनी आफैं केही द्विविधामा परेका देखिन्छन् । खास गरी धर्मपत्नी आरजु देउवाको कांग्रेस राजनीतिमा खासै पकडको स्थिति देखिन नसकेको अवस्थामा आफू अर्को एक अवधि सभापति भएर धर्मपत्नीलाई सघाउने कि उनलाई उनकै योग्यताको भरमा छाडिदिने ? सभापति देउवाको धर्मसंकट यही नै देखिन्छ । देउवाले आफूलाई सभापति पदमा नदोहोर्‍याउने हो भने पार्टीभित्र उनको मर्यादा र प्रतिष्ठा हलक्क बढ्नेछ । सभापति जो भए पनि, पार्टी सल्लाहकारका रूपमा उनको स्थान सुरक्षित रहनेछ । देउवाको अवकाशले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह थपिनेछ । सभापतिमा जो जिते पनि पार्टीका लागि देउवाले दिएको योगदान चर्चित हुनेछ र त्यसको महिमा बढ्नेछ ।
अहिले कांग्रेस सभापति पदका महत्त्वपूर्ण आकांक्षीहरूमा महामन्त्री शशांक कोइराला अनि केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाका नाम समाचारपत्रहरूमा देखिएका छन् । देउवा सभापति पदमा नलडेको अवस्थामा उनको बागडोर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, उपसभापति विमलेन्द्र निधिको हातमा आइपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा कांग्रेस महाधिवेशनको रौनक बढ्नेछ । माथि उल्लेख गरिएका नामहरूमध्ये कृष्ण सिटौलाबाहेक अरू नामसँग विरासत जोडिएको छ । सिटौलाले आफूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग गरेको सम्झौताको विरासतसँग पनि जोडेका छन् । त्यति बेलाको सम्झौता प्रक्रियामा उनको साथमा शेखर कोइराला पनि भएको बिर्सिनु हुँदैन । अर्को पक्षमा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीबीचको सम्झौतामा कुनै एक व्यक्तिको हकदाबी लाग्दैन । त्यसमा सबै कांग्रेसीको समान दाबी रहन्छ । त्यो अवस्थामा विरासतसँग नजोडिएका एक मात्र नेता सिटौला नै हुन सक्छन् ।
विरासतकै कुरा गर्ने हो भने, मायाले ‘मुनु’ भनेर बोलाइने शशांक कोइराला बीपी कोइरालाका कान्छा सुपुत्र हुन् । विरासतको राजनीतिमा उनी पहिलो पंक्तिमा आउँछन् । र पनि, बीपीका सुपुत्र भएका कारण मात्रैले कांग्रेस सभापतिमा उनको चयन सहज होला भन्न सकिँदैन । कांग्रेसले संस्थागत रूपमा आफ्ना नेताहरूलाई राजनीतिक विरासतका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न कतै पनि गरेको देखिँदैन । बीपी, गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महेन्द्रनारायण निधि लगायतका महत्त्वपूर्ण नेताहरू लोकतन्त्रप्रतिको सैद्धान्तिक निष्ठा, समाजवादी सिद्धान्त र जीवनदृष्टि तथा देशप्रतिको कर्तव्यपरायणताका कारण माथि उठेका हुन् । शशांकका लागि महाधिवेशनको मैदान सोचेजति सहज पनि नहोला ।
परिवर्तित समयले मानिसका जीवनमूल्यमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मूर्धन्य नेताहरूको जीवनशैली र आजको जीवनशैलीमा ठूलो अन्तर छ । समयको यो पाटोलाई बिर्सिनु शशांकका लागि मात्रै होइन, कांग्रेस सभापति पदका आकांक्षी सबैका लागि उत्तिकै जरुरी छ । शशांकले सुपरिचित नेत्र चिकित्सकका रूपमा नाम कमाएका छन् । उनको व्यक्तित्व आकर्षक छ । उनलाई हेर्नेका आँखा बीपीको अनुहारमा टक्क रोकिएको अनुभव गर्ने धेरै छन् ।
सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहका सुपुत्र प्रकाशमान सिंह कांग्रेस सभापति पदमा चुनाव लड्न उत्सुक मात्रै होइन, दृढ पनि देखिएका छन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नै प्रजातन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा सक्रिय रहेका सिंहले नेपाल विद्यार्थी संघको निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका थिए । काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा पनि प्रकाशमान सिंहको योगदान कम छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसभित्र मौलाएको एकाधिकारवादी राजनीतिक चरित्रविरुद्ध कांग्रेसभित्रैबाट चालिएको अभियानको कर्मठ नेता तथा अभियन्ताका रूपमा पनि सिंहको परिचय स्थापित छ । नेपालको राजनीतिमा देउवाको नेतृत्वमा भएको कांग्रेस विभाजनले सुखद परिणाम दिन सकेन । पछि देउवा कांग्रेस मूलधारमा समाहित भयो । देउवासँग असहमति बढ्न थालेपछि प्रकाशमान सिंह देउवाविरोधी खेमामा फर्किए । त्यसपछिको समयमा प्रकाशमान सिंहको राजनीतिक व्यक्तित्व मौलाउँदै गएको छ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो चुनावमा प्रकाशमान सिंहविरुद्ध साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्र उम्मेदवार उठेका थिए । सिंहका लागि यो चुनौती निकै खतरनाक साबित भएको थियो ।
शेखर कोइराला कांग्रेस सभापति पदका अर्का आकांक्षी हुन् । शेखर पनि कोइराला परिवारका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन् । नेपाली कांग्रेसकी नेत्रीका रूपमा लोकतान्त्रिक अभियानको सफलताका लागि नोना कोइरालाको योगदान अविस्मरणीय छ । विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा बसेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका कांग्रेस संगठनहरूको निर्माण र विकासमा ‘नोना आमा’ ले गरेको असीम दुःख सम्झिने धेरै छन् । शेखर तिनै नोना कोइराला तथा बीपीका माइला भाइ केशवप्रसाद कोइरालाका सुपुत्र हुन् । बीपी कोइरालाको देहावसानपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अघि बढाउन नोना कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘ब्याकबोन’ का रूपमा काम गरेकी थिइन् । उनले खडा गरेको त्यो विरासतमाथि शेखर कोइरालाको दाबी जायज मानिन्छ । त्यसबाहेक, शेखर आफैं विद्यार्थी जीवनमा आन्दोलनकारीको भूमिकामा निरन्तर देखा परेका थिए । ‘कालाजर’ का विशेषज्ञ चिकित्सक शेखर कोइरालाले धरानस्थित बीपी कोइराला शिक्षण अस्पतालको स्थापना र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।
महेन्द्रनारायण निधि नेपाली कांग्रेसभित्र गान्धीवादी विचारका संवाहक हुन् । निधिले सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध निःशस्त्र आन्दोलन गरे । उनको आन्दोलन विचारको आन्दोलन थियो । निधिका कान्छा सुपुत्र विमलेन्द्र निधि विलक्षण प्रतिभा नभएको भए सानै उमेरमा नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा पुग्ने थिएनन् । २०३६ सालमा भएको नेपाल विद्यार्थी संघको जनकपुर अधिवेशनमा स्वयं बीपी कोइरालाले निधिलाई त्यसको नेतृत्व सुम्पिनुभएको थियो । विमलेन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको सभापति पदको चुनाव लड्ने आकांक्षा नभएको त पक्कै होइन होला । उनले अहिलेसम्म हाउभाउले पनि आफ्नो इच्छा जताएका छैनन् । जुन दिन विमलेन्द्र निधिलाई लाग्नेछ सभापति पदप्रति शेरबहादुर देउवा निस्पृह छन्, त्यो दिन मात्रै उनले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्नेछन् ।
विमलेन्द्र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक जुझारु व्यक्तित्व हुन् । मधेसको राजनीतिमा कांग्रेस पछि परेको अहिलेको अवस्थामा विमलेन्द्रको उम्मेदवारी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने राय धेरैको छ । विमलेन्द्रले पिता महेन्द्रनारायण निधिको विरासतको प्रतिनिधित्व गरे पनि राजनीतिमा उनले आफ्ना पिताको अहिंसात्मक राजनीतिको पदचाप पछ्याएनन् । तत्कालीन पञ्चायत राजनीतिको प्रतिरोध गर्न अहिंसा मात्र पर्याप्त छैन भन्ने मान्यता राख्ने पिँढीका सदस्य हुन् उनी ।
कांग्रेसको महाधिवेशनमा खोजिने भावी नेतृत्वका सम्बन्धमा अहिलेसम्म देखिएको परिदृश्य यही हो । यो परिदृश्य अहिले जेजस्तो भए पनि, शेखर र शशांक दुई दाजुभाइबीच सहमति भएन भने चुनाव दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यो परिदृश्यमा भोलिका दिनमा अरू धेरै नाम थपिन सक्छन् । त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन । अहिले वामपन्थी दलका नेताहरूलाई शक्ति र सत्ताको लोभले जसरी गाँजेको छ, कांग्रेसीहरूले त्यो मोड पटकपटक पार गरिसकेका छन् । जनता राजनीतिक दलका जात्रा र तमासा हेर्दाहेर्दा आजित भैसकेका छन् । अब हुने कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व–संयोजन देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । मुख्य सूत्र यही नै हो ।
प्रकाशित : असार २५, २०७७ १०:१४